Ọnye na-bụ Amanda Berry? gịnị mere ikpe ekpere ji dị mkpa? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Ọnye na-bụ Amanda Berry? gịnị mere ikpe ekpere ji dị mkpa?
di Mina Del Nunzio - Machị 17, 2021
Onye bụ Amanda Berry? gịnị mere ekpere ji dị mkpa? Amanda Berry mụrụ ohu na Maryland, Amanda Berry nwere onwe ya pụọ ​​n'ịgbara ohu mgbe ọ dị naanị afọ atọ. Ugbu a, a tọhapụrụ ya n'agbụ ime mmụọ. Ma, ọ ka ga-amụta nrubeisi ndị a bụ okwu ya tupu ọ bụrụ onye ozi ala ọzọ nke Kraịst, anyị na-echeta otu akụkụ n'otu n'ime ihe odide ya: "oh, ọ bụrụ m na Chineke erubere ya isi oge niile, udo m ga-aga dị ka osimiri, mana ọtụtụ mgbe adaa m. " Otu n’ime ihe ndị o mejọrọ bụ alụmdi na nwunye ọjọọ abụọ. M ga-ekpe ekpere ọzọ ", ọ bụrụ na enwere ihe dịka nzọpụta, ekpebisiri m ike na ọ ga-enweta ya n’ehihie a ma ọ bụ nwụọ ”.
Ekedi ke usen emi, Tuesday, March 17, 1856, ndien enye ke akanam. Ọ ga-edozi tebụl ma, ọ rụchaa ọrụ ya, ọ ga-agbadata n'ụlọ okpuru ulo ikpe ekpere. Ọ fọrọ nke nta ka ọ tụrụ anya na ezinụlọ ahụ ga-ahụ ozu ya. O kperela ekpere tupu mgbe ahụ ma ọ rụpụtaghị ihe ọ bụla. Anyị na-echeta okwu ya na o dere: "Enweghị m ike icheta oge m bụ nwata mgbe achọghị m ịbụ Onye Kraịst na-ekpekarị ekpere nanị m. Ma, o doghị ya anya na Chineke nabatara ya."
Amanda Berry, chere na ebe ịchụ aja bụ ụzọ a ga-esi mee ka anyị na Chineke dịrị n'udo.N'ikpeazụ, ọ ghọtara na ọ bụghị Churchka na ebe ịchụ aja bụ ụzọ e si erute Chineke, kama na ikpe ekpere. Amanda dị njikere itunye na akwa nhichapụ nke ọchụchọ ya maka Chukwu, mana ọ takwunyere ya, sị: "kpee ekpere ozo ”. N’ihi ya, ọ gbadara n’ụlọ okpuru ulo. Ọzọkwa ekpere ya yiri ka ọ baghị uru. Ka oge na-aga ọ ghọtara na ya mara Chineke, na ọ ga-esokwa ndị ọzọ kpaa maka ya.
Amanda Berry, n’enwe obi nkoropụ n’ihi na ọ na-eche echiche n’ekpere na-abaghị uru, kwuru, sị:"Oh Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ị nyere m aka m ga-ekwere gị." Oh, udo na ọ joyụ nke kpuchiri mkpụrụ obi m! " Site n'ụbọchị ahụ gawa, Amanda nwere ebumnuche abụọ: ịmatakwu Chineke nke ọma na ịkọrọ ndị ọzọ banyere ya.
Ọnye na-bụ Amanda Berry? gịnị mere ikpe ekpere ji dị mkpa? gini ka emere?
Christianity: onye bụ Amanda Berry? gịnị mere ekpere ji dị mkpa? gini ka emere? Amanda ghọrọ onye na-agbasa oziọma na ịbụ kwa onye otu Kraịst. Ọ mụtara ịgbaso aro nke ndị Mọ Nsọ nke nyere ya ohere imeghe ụmụ mgbei, jere ozi dị ka ndị ozi ala ọzọ, ma dee akụkọ ọdịmma mmadụ nke na-adọrọ mmasị nke ụmụ nwanyị ojii mgbe Agha Obodo America gachara. Amanmụ Amanda niile nwụrụ na-eto eto, mana n'okwukwe dike ọ nwere ike ịsị: "Uche gi, O nwe-ayi, obughi nkem".
Ọgbakọ nke mbụ, n'ihi na ọ dị mkpa ime mmemme
Gịnị mere o ji dị mkpa ka ị na-eme ebere?
Azịza 3 na ndị mmụọ ozi Guardian ị kwesịrị ịma
Ihe 4 nke okwukwe iji cheta mgbe ị na-atụ egwu
Ọrụ ebube nke Mama Teresa, nke Chọọchị kwadoro
Natuzza Evolo na Padre Pio: nzukọ mbụ ha
Padre Pio: asịrị nke Banker of God